CAN 2019 Any Egypte no hotanterahina
Rugby « Roi du Quartier » Nahery ny Ftm Manjakaray
Fampitana mivantana ny CAN 2019 TVM sy RNM ihany, voarara ny eny an-kalamanjana
Ny TVM sy ny RNM irery ihany no nahazo ny alalana avy amin'ny CAF amin'ny fampitana mivantana ny lalao amin'ny CAN 2019 eto Madagasikara, hoy ny Tale jeneralin’ny ORTM Belalahy Jean Yves.
Rallye Yacco Visca Power Lasan-dRivo Aina sy Ando ny fandresena
Rivo Aina Randrianarivony tompondaka lefitry ny rallye 2018 niaraka tamin’ny rahalahiny Ando Randrianarivony nitondra ny fiara Subaru
Kick Boxing Analamanga Fantatra ireo tompondaka 2019
Mpikatroka nahatratra 85 avy amin’ny seksiona 5 mandrafitra azy (Antananarivo-renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Andrefan’Iarivo ary
Copa America Vao manomboka dia resy sahady ry Messi
Nanomboka ny sabotsy 15 jona teo ka hifarana ny alahady 07 jolay 2019 ny Copa America 2019 atao any Brezila.
Lalao CAN 2019 Hanohana ny ekipam-pirenena Malagasy ny orinasa STAR
Hotanterahina manomboka ny 21 jona ho avy izao ny lalao fifanintsanana CAN 2019.
Notinapaky ny Komity Mpanatanteraky ny CAF « Confédération Africaine de Football » notarihan’ny filohany, Atoa Ahmad, nivory tany Dakar Sénégal omaly talata 08 janoary 2019 fa any Egypte no hatao ny fifaninanana CAN 2019 (15 jona-13 jolay).
Nambaran’Atoa Ahmad taorian’ny nanambarana an’izany fanapahan-kevitra izany fa nosafidiana i Egypte manoloana an’i Afrika Atsimo nifaninana taminy ny handray an’ity fifaninanana ity noho ny fahazoana antoka mazava avy amin’ny praiminisitra Ejypsiana ny hanohana ara-bola an’ity hetsika ity na dia eo aza ny tetibola efa nomanina amin’izany. Ry zareo Afrikanina Tatsimo kosa etsy an-kilany dia fantatra fa manana fahasahiranana ara-bola ka tsy ho afaka hanohana an’ity hetsika ity. Fantatra anefa fa samy manana fotodrafitrasa iraisam-pirenena hahazoana mandray fifaninanana izany ny roa tonta. Nambaran’Atoa Ahamad filohan’ny CAF ihany koa fa tsy dia misy atahorana loatra ny resaka fampihorohoroana mety hisy any Egypte amin’io volana jona io. Tahaka an’i Frantsa izay hisehoan’ny resaka fampihorohoana koa ankehitriny nefa mbola hatokisan’ny Fifa handray ny Mondial vehivavy 2019, hoy izy.